Android အတွက်ဒေါင်းလုပ် Black SMS Theme APK
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Black က SMS ကိုအဓိကအကြောင်းအရာ
Black က SMS ကိုအဓိကအကြောင်းအရာ APK ကို
Black က SMS ကိုအဓိကအကြောင်းအရာ DOWNLOAD နှင့်မယုံနိုင်စရာအဆင်းအရောင်နှင့်ပြည့်နှက်နေတဲ့ကမ္ဘာကြီးမှသင်၏မိတ်ဆွေများကိုစာပို့ပြင်ဆင်!
သင်တစ်ဦးလိုအပ်ခဲ့လျှင် ချက်ချင်း သင့်ရဲ့ Android ကို SMS ဆောင်ပုဒ်အသစ်ကြည့်, ငါတို့တစ်ခုခုရှိ အခမဲ့အဘို့, စိတ်လှုပ်ရှား, မင်းအတွက်ပဲ! အဆိုပါပြောင်းလဲမှုဖြစ်လိမ့်မည် အာမခံ Black က SMS ကိုအဓိကအကြောင်းအရာ: အလမ်းအတွက်သင်၏စာသားမက်ဆေ့ခ်ျပို့ app ကိုဒီအခမဲ့ SMS စာတိုဆောင်ပုဒ်နှင့်အတူကြည့်ရှုသည်။ အကယ်. သင်က ချစ်ခြင်းမေတ္တာ သငျသညျဖို့လိုအပျသောစာသားမက်ဆေ့ခ်ျပေးပို့ခြင်း ကြိုးစား SMS ကို messenger ကို themes များ။ သငျသညျကို SMS များအတွက်အကောင်းဆုံးဆောင်ပုဒ်တွေထဲကရှိလိမ့်မည်!
✱သစ်တစ်ခုအံ့သြဖွယ်စာရိုက်ဆောင်ပုဒ် app ကိုရရန်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်း✱
•Black က SMS ကိုအဓိကအကြောင်းအရာ Download; Android အတွက်ဒါဟာအခမဲ့ SMS စာတိုဆောင်ပုဒ်အားလုံးအန်းဒရွိုက်ဗားရှင်းများအပေါ်အလုပ်လုပ်တယ်;
•app ကိုဖွင့်ပါ နှင့်ပွတ်ဆွဲ;
•"Set Active ကိုအဓိကအကြောင်းအရာ" ကိုရွေးချယ်ပါတစ်စက္ကန့်အနည်းငယ်စောင့်ဆိုင်းနှင့်အသငျသညျ DONE ကြသည်!
•ဘယ်လောက်ရှိသလဲများနှင့်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ဖို့မေ့လျော့တော်မ! ကျနော်တို့အလွန်ကတန်ဖိုးထားသကဲ့သို့သင်တို့ကိုဤအသစ်သောစိတ်ကူးကို SMS ဆောင်ပုဒ်ကိုစဉ်းစားသောအရာကိုကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါ!
•ခံစား Start စာသားမက်ဆေ့ခ်ျပေးပို့ဖို့ဒီစိတ်ကူးသစ်ကိုလမ်း!
ဤသည်အခမဲ့ထုံးစံကို SMS ဆောင်ပုဒ်ကတော့ GO SMS ကို Pro ကိုဒါမှမဟုတ်နယူး Messenger ကိုဗားရှင်း 2017 app ကိုအတူအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ သငျသညျ GO SMS ကို Pro ကိုသို့မဟုတ်နယူး Messenger ကိုဗားရှင်း 2017 သင့်ရဲ့ Android device ကိုအပေါ်ကို install ကြဘူးဆိုရငျ, မှာအားလုံးစိတ်ပူစရာမလိုပါ။ ဤသည်ကို SMS ဆောင်ပုဒ်လုံခြုံစွာလွယ်ကူသောခြေလှမ်းသူတွေကိုတစ်ဦးရရှိရန်သင်ပြောပြမည်! သင်က Black SMS ကိုအဓိကအကြောင်းအရာဖွင့်လိုက်တဲ့အခါသင်က download လုပ်ပါမှပြီးပြည့်စုံသောညွှန်ကြားချက်များကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
★သင့် android device များအတွက်ပိုပြီးအခမဲ့ SMS ကို themes များချင်ပါသလား? ★
ကျွန်ုပ်တို့၏အံ့သြဖွယ် developer page ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု! ကျွန်တော်တို့ အမြဲ အသစ်ကထုံးစံကို SMS themes များနှင့် Android ဖုန်းများပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သောများစွာသောအခြား personalization apps များရှိသည်! ဆောင်ပုဒ်သင်ရွေးချယ် ကဲ့သို့ အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့အခမဲ့ SMS ကို themes များအနေဖြင့်သို့မဟုတ်ပဲသူတို့အားလုံးကိုကြိုးစားပြီး! ကျွန်ုပ်တို့အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုချစ်သောကြောင့်ကျနော်တို့စိတ်ထဲမမည်! Black က SMS ကိုအဓိကအကြောင်းအရာသင်ပို့သောသူတို့အားအထူးစာသားမက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုလှပသောအခမဲ့ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။
Black က SMS ကိုအဓိကအကြောင်းအရာအသုံးပြုတဲ့အခါ, သင်ရရှိမည် လူအပေါင်းတို့သည်အကောင်းဆုံး features တွေ အဆိုပါစာတိုပေးပို့ရေး app ရဲ့:
•✧message Encryption နှင့် privacy ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး,
•✧ keyword ကို ပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့်နာမည်ပျက်စာရင်းသွင်း စပမ်းနှင့်မလိုချင်တဲ့မက်ဆေ့ခ်ျစီစစ်ရန်,
✧more SMS ကိုအသစ် themes များ,
✧အံ့သြဖွယ်ဖောင့် သင်ရွေးချယ်သော။ စာသားမက်ဆေ့ခ်ျကိုဖတ်ရှုခြင်းနှင့်ရေးသားခြင်းများအတွက် font ကိုပြောင်းပေးပါ! ဤသည်အခမဲ့စာပို့ဆောင်ပုဒ်စျေးကွက်အပေါ်အများဆုံးအံ့သြဖွယ်စိတ်ကြိုက် apps များထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည် မည်သည့် Android ဗားရှင်းနဲ့အတူအကျင့်ကိုကျင့်.
✱သငျသညျအစဉျအမွဲစာသားမက်ဆေ့ခ်ျပေးပို့လမ်းကိုပြောင်းလဲပါ ကျွန်ုပ်တို့၏အံ့သြဖွယ် SMS ကိုဆောင်ပုဒ်နှင့်အတူ, Black က SMS ကိုအဓိကအကြောင်းအရာ! ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုံးစံ SMS ကို themes များထဲကတစ်ခုနှင့်အတူသင့်ရဲ့ device ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပါနှင့် ငါတို့သည်သင်တို့ကြောင့်နောင်တမရကြလိမ့်မည်, ကတိပေး!
ဒီ✱Download အသစ်နှင့်အခမဲ့ SMS စာတိုဆောင်ပုဒ် နှင့်ယနေ့ကကိုသက်ဝင်! သငျသညျသေးယုံကြည်တယ်မဟုတ်လျှင်, အံ့သြဖွယ်ကိုကြည့် HD ကို screenshots များ ဒီအခမဲ့ SMS စာတိုဆောင်ပုဒ်သင့် Android ဖုန်းသို့မဟုတ် Tablet ကိုအပေါ်ကြည့်ရှုမည်ကိုဘယ်လိုကြည့်ပါရန်။
လုံခြုံရေးနှင့်ဒီဇိုင်းတိုးတက်မှုများ။ လွယ်ကူကိရိယာအားလုံးပေါ်တွင်ဆောင်ပုဒ်လျှောက်ထားရန်လုပ် !!
Black က SMS ကိုအဓိကအကြောင်းအရာ
7.94 ကို MB
အခမဲ့ 2019 Themes & Livewallpapers
Messenger အသစ် ၂၀၂၀
ကွန်ယက်စကင်နာ - အိုင်ပီစကင်နာ - ဘယ်သူအသုံးပြုသည် ...
ဗွီဒီယိုပြောင်းစက်၊ Compressor MP4, 3GP, MKV, MOV, AVI